Ny Apple AirPods atolotra amin'ny vidiny 149 euro | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple AirPods atolotra amin'ny vidiny 149 euro
Raha misy vokatra izay miteraka savorovoro eo amin'ireo mpampiasa Apple dia ireo no AirPods. Tena manana izany isika vokatra mahatalanjona amin'ny vidiny tena misy ao Appleka lalao mety indrindra ho an'ny rehetra izany.
Saingy manana tolotra mahaliana ihany koa izahay indraindray tonga any aminay avy amin'ny fivarotana antoko fahatelo toa ny eBay, amin'ity lafiny ity dia mila milaza izahay fa ny vidin'ny headphone Apple dia milatsaka 16% raha oharina amin'ny vidiny mahazatra ary tena tsara izany tolotra ho an'ireo izay te-hividy ireo AirPods ireo.
ny AirPods dia azo alaina 149 euro Amin'izao fotoana izao ao amin'ny eBay, taorian'ny faran'ny herinandro feno tolotra tao amin'ny magazay an-tserasera, dia misy tolotra maro hafa miseho na mijanona toy ny tranga amin'ireo headphones ireo. Lojika ny tokony hataontsika araraoty ireo fihenam-bidy ireo ary ankafizo ireo vokatra tsara ny haingana dia tsara kokoa, satria raha mila miandry isika hahitana raha mamokatra vokatra vaovao na mitovy izy ireo dia tsy hividy na inona na inona isika.
Ny tolotra dia haharitra mandra-pahatapitry ny entana ary amin'ity tranga ity raha mbola nanoratra ny lahatsoratra dia nisy varotra 385 izahay, ka tsy mieritreritra izy ireo fa manana tahiry betsaka kokoa. Ireo tolotra amin'ity karazana ity dia tsy maintsy araraotina ary na dia marina aza fa misy ny tsaho momba ny famoahana kinova faharoa amin'ireto AirPods eny an-tsena ireto dia tsy manana angon-drakitra manokana momba ny fandefasana azy ireo ary na izany na tsia dia mitranga izy ireo mahatratra ny tanantsika, efa hankafizantsika ny headphones Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Ny Apple AirPods atolotra amin'ny vidiny 149 euro